Shiinaha Fused Silica ee Soosaaraha Warshadaha Elektiroonigga iyo Badeecada | Dinglong
Silligeena isku dhafan ayaa leh adkeysi koronto oo aad u sareeya, balaadhinta miisaanka yar iyo kuleylka kuleylka oo hooseeya. Waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha elektarooniga ah sida buuxiyaha ee epoxy xeryahooda wax taaj oo kale for semi-kaari.
adkeysiga korantada sare, balaadhinta qiyaasta hoose iyo kuleylka kuleylka oo hooseeya
Waxyaabaha ugu fiican ee dahaadhka korantada
Silligeena isku dhafan ayaa leh adkeysi koronto oo aad u sareeya iyo kuleylka kuleylka oo hooseeya, sidaa darteed waxaa loo adeegsadaa warshadaha elektarooniga sida buuxinta walxaha isku xira epoxy-ga ee kala-hagayaasha.
Dinglong waxay soo saartaa noocyo badan oo silica silsilado ah iyo buundooyin alaab gaar ah si loo buuxiyo dhammaan shuruudaha warshadaha elektarooniga. Waxaan bixinnaa isku-darka sare ee isku-darka burka silica ee loogu talagalay noocyo badan oo codsiyo buuxiyo ah. Naqshadeynta foornada kacaankeena iyo howsheena waxay ka caawineysaa kahortaga sheyga silica ee iskujira inuu ku sumoobo alaab aan aheyn silica iyo crystalline-silica, taas oo keeneysa shey silica amorphous ah oo iskujira 99.98% daahir ah kiimikada.
Silicaani isku dhafan ee loogu talagalay warshadaha elektarooniga waxaa lagu soo saaray xarun shahaado ku leh magaalada Lianyungang, Shiinaha. Muddo 30 sano ah oo la aasaasayey, Dinglong wuxuu kasbaday taageero farsamo iyo farsamo oo xoog leh iyo khibrado aad u tiro badan oo lagu soo ururiyey soosaarida agab quartz ah Hawlaheena wax soo saar waxaa loo habeeyay isku waafaqsanaanta iyo isku halaynta - caawinta hubinta tayada iyo qiimaha wax soo saarka la isku halleyn karo. Waxaan aaminsanahay in alaabooyinka la isku halleyn karo ay naga caawin karaan helitaanka iibinta hoggaaminta iyo dhisidda kalsoonida iyo saaxiibtinimada macaamiisheenna.
Hore: Buro Silica ah
Xiga: Silica Fused ah oo loo shubay Maalgashiga